Marcelo (72' minutes)	 FT Morales (6' minutes), Martí (13' minutes pen)
20 Oct 2018 . 10:22 PM
ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ လာလီဂါပွဲစဉ်(၉)မှာ လီဗန်တေးအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားခဲ့ရပေမယ့် ( ၁ – ၂ )နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရှုံးပွဲကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းဟာ လာလီဂါနောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပြီး (၁)ပွဲသရေ ၊ (၃)ပွဲရှုံးရလဒ်ရခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ၁ – ၂ လီဗန်တေး
နည်းပြလိုပယ်တက်ဂီ Lopetegui ရဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ကံမကောင်းခဲ့ဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ ဂိုးတွေစောစောစီးစီးပေးလိုက်ရတာကြောင့်လည်းပွဲက ပိုခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို လူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မာရီယာနို Mariano ၊ အဆန်စီယို Asensio တို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြတာကြောင့် ဖိအားတွေများသွားတဲ့ အချိန်မှာအသင်းကို ဦးဆောင်သူမရှိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ လီဗန်တေး အသင်းအတွက် ဂိုးတွေကို ပွဲချိန်(၆)မိနစ်မှာ မိုရာလက်စ် Morales ၊ ပွဲချိန် (၁၃)မိနစ်မှာ မာတီ Martí တို့ကပယ်နယ်တီကနေ သွင်းယူပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာတော့ လီဗန်တေးအသင်းရဲ့ ဂိုးသမား Oier ရဲ့ လက်စွမ်းတွေကို မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့လက်စွမ်းကောင်းတွေကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဂိုးရဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဘေးလ် Bale ၊ ဘန်ဇီမာ Benzema တို့ကိုထည့်ပြီး တိုက်စစ်ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ပေမယ့် လီဗန်တေး ဂိုးသမား Oier ကတော့ လက်စွမ်းကောင်းတွေပြနေဆဲပါပဲ။ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ချေပဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်(၇၂)မိနစ်မှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ မာဆယ်လို Marcelo က အကောင်းဆုံးကန်သွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး(၅)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့သလို (၄၈၁)မိနစ်ကြာ စံချိန်တင်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ နည်းပြလိုပယ်တက်ဂီရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo: Real Madrid Twitter , Yahoo! Sports , Evening Standard
ရလဒျဆိုးတှကေနေ မရုနျးထှကျနိုငျခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျမကျဒရဈ
ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ရုနျးကနျနရေတဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ လာလီဂါပှဲစဉျ(၉)မှာ လီဗနျတေးအသငျးကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံကစားခဲ့ရပမေယျ့ ( ၁ – ၂ )နဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒီရှုံးပှဲကွောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ လာလီဂါနောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့ပွီး (၁)ပှဲသရေ ၊ (၃)ပှဲရှုံးရလဒျရခဲ့ပါတယျ။
ရီးယဲလျမကျဒရဈ ၁ – ၂ လီဗနျတေး
နညျးပွလိုပယျတကျဂီ Lopetegui ရဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ကံမကောငျးခဲ့ဘူးလို့ ပွောရမှာပါ။ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့ ဂိုးတှစေောစောစီးစီးပေးလိုကျရတာကွောငျ့လညျးပှဲက ပိုခကျခဲသှားခဲ့ပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို လူငယျတှဖွေဈကွတဲ့ မာရီယာနို Mariano ၊ အဆနျစီယို Asensio တို့ဦးဆောငျခဲ့ကွတာကွောငျ့ ဖိအားတှမြေားသှားတဲ့ အခြိနျမှာအသငျးကို ဦးဆောငျသူမရှိဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ လီဗနျတေး အသငျးအတှကျ ဂိုးတှကေို ပှဲခြိနျ(၆)မိနဈမှာ မိုရာလကျဈ Morales ၊ ပှဲခြိနျ (၁၃)မိနဈမှာ မာတီ Martí တို့ကပယျနယျတီကနေ သှငျးယူပေးခဲ့ကွတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲမှာတော့ လီဗနျတေးအသငျးရဲ့ ဂိုးသမား Oier ရဲ့ လကျစှမျးတှကေို မဖွဈမနေ အသိအမှတျပွုရမှာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့လကျစှမျးကောငျးတှကွေောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဂိုးရဖို့ ခကျခဲခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဘေးလျ Bale ၊ ဘနျဇီမာ Benzema တို့ကိုထညျ့ပွီး တိုကျစဈကို အပွောငျးအလဲလုပျခဲ့ပမေယျ့ လီဗနျတေး ဂိုးသမား Oier ကတော့ လကျစှမျးကောငျးတှပွေနဆေဲပါပဲ။ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ ခပြေဂိုးကိုတော့ ပှဲခြိနျ(၇၂)မိနဈမှာ ခွစှေမျးပွကစားနတေဲ့ မာဆယျလို Marcelo က အကောငျးဆုံးကနျသှငျးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံနောကျဆုံး(၅)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့သလို (၄၈၁)မိနဈကွာ စံခြိနျတငျဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးမှုနဲ့လညျး ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ နညျးပွလိုပယျတကျဂီရဲ့ အနာဂတျဟာ ဘာတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့သှားကွရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။